भ्रम वस दिएको भोट फिर्ता गर बाबुराम - bisalchautari.com
भ्रम वस दिएको भोट फिर्ता गर बाबुराम
August 21, 2013 root
पुर्व प्रधानमन्त्रि बाबुराम भट्टराईले आज कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित अर्जुन नरसिंह केसिको लेखलाई लिएर टिव्टर मा ट्विट गरेका छन् । उनले लेखेका छन्–‘ आजको ‘कान्तिपुर दैनिक’मा श्री अर्जुन नरसिंह कें.सी. ले मलाई भ्रमवश दिनुभएको ‘धन्यवाद’ वहालाई नै फिर्ता गरेको छु ।’
भट्टराईले लेखेको यो टिव्टमा धेरै जनाले कमेन्ट गरेका छन् । जस मध्ये एक घत लाग्दो कमेन्ट Idiosyncrasy ले लखेका छन् –‘मैले भ्रमवस् दिएको भोट पनि फिर्ता गर … सक्छौ ? भनेर लेखेका छन् । यो कमेन्टपछि भट्टराईको टिव्ट आज लोकप्रिय बनिरहेको छ ।